July 9, 2019 - CeleLove
မင်းသမီးချောလေး စံရတီမိုးမြင့်ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်…
July 9, 2019 Cele Love 0
မင်းသမီးချောလေး စံရတီမိုးမြင့်ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်… သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး စံရတီမိုးမြင့်ကတော့ ကြွေရုပ်လေးတစ်ရုပ်ပမာ လှပလွန်းတာကြောင့် မိန်းကလေးချင်းတောင် ကြွေနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင် ပြီးပြည့်စုံလွန်းတဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်က ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ စံရတီမိုးမြင့်က ပရိသတ်တွေအားလုံးအပေါ်မှာ ကြင်ကြင်နာနာ […]
မနက်စောစော အိပ်ယာထသူတွေသာ ရရှိမယ့် အံ့မခန်း ကောင်းကျိုး(၅)မျိုး
မနက်စောစော အိပ်ယာထသူတွေသာ ရရှိမယ့် အံ့မခန်း ကောင်းကျိုး(၅)မျိုး သင်က မနက်ဆိုရင် နေမြင့်အောင် အိပ်တတ်ပြီး အလုပ်သွားဖို့ မဖြစ်မနေထရတော့မယ်ဆိုမှ အိပ်ယာကနေ ပျင်းပျင်းရိရိနဲ့ ထတတ်သူလား။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ မနက်ဆို စောစောနိုးနေတတ်ပြီး လုပ်စရာအလုပ်တွေကို စလုပ်နေတတ်သူလား …? တကယ်လို့သာ သင်က မနက်စောစောထပြီး အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် သင်ရရှိနိုင်မယ့် […]
ဆရာမ မနှင်းနု ဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ ပြောပြလာတဲ့ ဖခင် ဦးဝင်းမြင့် …..
ဆရာမ မနှင်းနု ဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ ပြောပြလာတဲ့ ဖခင် ဦးဝင်းမြင့် ….. ကုမုဒြာ။ ။အခု ဆရာမ မနှင်းနုက ထွက်ပြေးသွားပြီ ပျောက်သွားပြီ ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးပြောနေကြတယ်။အဲတော့ အခု ဆရာမ မနှင်းနု ဘယ်မှာ ရှိနေလဲ ပြောပြပေးပါအုံး …။ ဦးဝင်းမြင့်။ ။တရားစခန်းမှာ ဝင်နေပါတယ် […]
WH ကျောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်သူ ဒေါ်သီရိမေ ပွဲကြမ်းနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်
WH ကျောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်သူ ဒေါ်သီရိမေ ပွဲကြမ်းနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ် WH ကျောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်သူ သီရိမေ ပွဲကြမ်းနေတယ် ဘာတွေလားတော့ သေချာမသိဘူး ကွကိုယ်သာ ကြည့်လိုက်တော့…..😁 ပရော် ပရော် ပရော် ဖက်ရှင်နယ် ဆန်ဆန် ပြောတာနေတာပါလို့……🙃🙃🙃 crd ဘာတေဖြစ်နေကြလဲတော့မသိဖူး ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးသာ ကြည့်လိုက်နော် …….. […]
”ချစ်သူကို အပိုင်ပေးဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ ပန်ကိတ်”
”ချစ်သူကို အပိုင်ပေးဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ ပန်ကိတ်” ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့ မိန်းကလေးများဟာ အရင်ကထက် ပိုလှလာသလို ပိုပြီးလည်း ရင့်ကျက်လာကြပါတယ်။ ၆ နှစ်ခန့်တွဲခဲ့တဲ့ ရည်းစားဖြစ်သူ နဲ့လမ်းခွဲပြီးနောက် ပန်ကိတ်ဒါဒါတစ်ယောက် အရင်ကထက် ပိုလှလာခဲ့ပါတယ်။ပိုလှလာရုံမကဘဲ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာမှုကြောင့် ပရိသတ်တွေပိုမို ဝန်းရံလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။စကားသံဝဲဝဲလေးနဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ အကြံပေးချက်လေးတွေကို […]
Group Chat ပေါက်ကြားသွားခဲ့ပြီး အကောင့်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့ Wisdom Hill ပိုင်ရှင်၏ညီမ သီရိမေ
Group Chat ပေါက်ကြားသွားခဲ့ပြီး အကောင့်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့ Wisdom Hill ပိုင်ရှင်၏ညီမ သီရိမေ Wisdom Hill ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာအပြန်အလှန်ဖြေရှင်းနေကြတာကိုစာဖတ်သူတွေသိပြီးသားဖြစ်သလို ကျောင်းပိုင်ရှင်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ သီရိမေဟာလည်း အမှုကိစ္စဖြစ်ကတည်းက အမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုမှုများကိုလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှတွေ့မြင်ရနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ထိုသို့အခြေအတင်ဖြစ်ပီး မသဇင်ထက်တို့သားအမိမှာ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ပြန်သွားရကြောင်းအား စာဖတ်သူတို့လည်းသိခဲ့တဲ့ပြသနာတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ် …။ ယခုအခါ သီရိမေတို့ရဲ့ […]
တန့်ယန်းမြို့ ကျောင်းသူတစ်ဦးအား ဝိုင်းရိုက်နှက်နေသည့် မိန်းကလေးတစ်စု ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်လာ
တန့်ယန်းမြို့ ကျောင်းသူတစ်ဦးအား ဝိုင်းရိုက်နှက်နေသည့် မိန်းကလေးတစ်စု ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်လာ မျက်လုံးချင်း အကြည့်ဆုံသည်ကို မကျေနပ်၍ ကျောင်းသူတစ်ဦးအား ဝိုင်းရိုက်နှက်သည့် မိန်းကလေးတစ်စုကို အမှုဖွင့်ထား ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) တန့်ယန်းမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့က အသက် (၁၄)နှစ်ဝန်းကျင် ကျောင်းသူတစ်ဦးကို မျက်လုံးချင်းဆုံသည်ဟုဆိုကာ ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကာ […]
နှင်းနု ပျောက်တာမဟုတ်ဘူး ဖျောက်ထားတာတဲ့ (ဖတ်တာကြည့်လိုက်တော့) …..
နှင်းနု ပျောက်တာမဟုတ်ဘူး ဖျောက်ထားတာတဲ့ (ဖတ်တာကြည့်လိုက်တော့) ….. ပည်ထဲရေးကားနဲ့ မန္တလေးဘက်ကို ခေါ်သွားတယ် …။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မီဒီယာတွေ ဒီတခါမေးမြန်းတာခံရရင် ပြည်ထဲရေးလိမ်နေတာတွေ အစထွက်မှာစိုးလို့အောင်ဝင်းခိုင်ကို အစဖျောက်သလို ဘယ်သူမှမတွေ့နိူင်တဲ့နေရာကိုပို့ လိုက်တာ …. အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့မနက် ကျောင်းကားဖယ်ရီလေးလာတယ် Victoria လေးလဲပါလာတယ် ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင် […]
တန့်ယန်းမြို့တွင် မျက်လုံးချင်း အကြည့်ဆုံသည်ကို မကျေနပ်၍ ကျောင်းသူတစ်ဦးအား ၀ိုင်းရိုက်နှက်သည့် မိန်းကလေးတစ်စု
တန့်ယန်းမြို့တွင် မျက်လုံးချင်း အကြည့်ဆုံသည်ကို မကျေနပ်၍ ကျောင်းသူတစ်ဦးအား ၀ိုင်းရိုက်နှက်သည့် မိန်းကလေးတစ်စု ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) တန့်ယန်းမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့က အသက် (၁၄)နှစ်ဝန်းကျင် ကျောင်းသူတစ်ဦးကို မျက်လုံးချင်းဆုံသည်ဟုဆိုကာ ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကာ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် တင်ခဲ့သည့် မိန်းကလေးတစ်စုအား အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားကြောင်း သိရှိရ […]
သင့်စိတ်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်မှုကင့်မဲ့ပြီး ပင်ပန်းလွန်းနေကြောင်းဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာများ
သင့်စိတ်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်မှုကင့်မဲ့ပြီး ပင်ပန်းလွန်းနေကြောင်းဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာများ စိတ်ထောင်းလို့ကိုယ်ကြေဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း စိတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဘယ်ေ လာက် ပဲ အပြင်ပန်းမှာ ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်နေပါစေ အတွင်းစိတ်မှာ ပင်ပန်းနေတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်နေထိုင်မှုပုံစံ မှာ ထင်ဟပ်နေပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သင့်စိတ်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့ပြီး ပင်ပန်းလွန်းနေကြောင်းဖော်ပြေ နတဲ့ […]